Yenza amakhadi eshishini oqobo ngokulula ngamakhadi oshishino weGN | Ndisuka mac
Amakhadi eshishini ayinto ebaluleke kakhulu kumfanekiso wenkampani okanye wobungcali. Isenzo esilula sikuvumela ukuba wandise uthungelwano lwabafowunelwa, abathengi, ababoneleli kwaye ke, uyilo kunye nokhathalelo oluthathwayo xa kulungiswa amakhadi oshishino kubalulekile.
"Amakhadi oshishino eGN aMaphepha" ayisosicelo esilula, kodwa ingqokelela enkulu yeetemplate ngokukodwa eyenzelwe ukuba isetyenziswe kumaphepha, Umhleli wombhalo weApple. Kulepakethi uyakufumana iseti eyenziwe ngaphezulu kwamakhulu amabini eetemplate zentsusa, ezinoyilo ezahlukeneyo kunye nezitayiles, onokuhambisa ngayo umfanekiso ongcono wenkampani yakho okanye ishishini. Unokukhetha phakathi kweklasikhi kunye nesitayile sekhadi leshishini, okanye ukhethe enye into enesibindi, enemibala, yoyilo kunye neyangoku.
Amakhadi oShishino eGN aMaphepha
Nokuba yeyiphi na indlela oyikhethayo kumakhadi akho oshishino, iitemplate eziManyaniswe neNode kule pack ziya kukunceda ufumane eyona milo kunye nesitayile senkampani yakho. Ukongeza, yifayile ye- Kulula kakhulu ukusebenzisa isixhobo, Njengolunye usetyenziso esele sikubonisile kulo Ndisuka mac.
Zonke iitemplate zi ngentando kakhulu. Zonke zinezinto ezahlukeneyo onokuthi uzenze ngokwezifiso zakho kunye neemfuno zakho, ukutshintsha ubungakanani bazo, ukutshintsha imibala, ukuguqula ubungakanani kunye nefonti yeleta, ukongeza okanye ukuphelisa iibhokisi zombhalo, ubhale ngqo isicatshulwa sakho (okanye usincamathisele) igama leshishini lakho, iinkcukacha zakho zonxibelelwano ... Nokuba yeyiphi na ingcinga onayo engqondweni, ungayenza ngokukhawuleza kwaye ngokulula, ngaphandle kwengxaki.
Ukongeza, ubungakanani sele buhlengahlengisiwe kwiifomathi ezisemgangathweni ke, wakuba ugqibile uyilo lwakho, kuya kufuneka uziprinte.
"Amakhadi eShishini e-GN amaPhepha" anexabiso eliqhelekileyo elingaphezulu kwe-euro ezilishumi, nangona kunjalo ngoku unokuzuza kwisaphulelo sama-90% kwaye usifumane nge-1,09 nje kwiVenkile ye-Mac App. Esi sipho siza kubulela kumkhankaso we "Mac App Store Sales", ke iya kuqhubeka iyasebenza kude kube ngomso, ngolwesiHlanu ezinzulwini zobusuku. Ungalibali ukuba uyakufuna ukufakwa kwamaphepha kwi-Mac yakho, kwaye ukuba awugqibi ukuthetha, ungacela ukubuyiselwa imali kwaye uphinde ufumane i-euro oyityalileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Yenza amakhadi eshishini oqobo ngokulula ngamakhadi oshishino we-GN